Pirlo oo ka hadlay go’aankiisa kaga aadan Ronaldo kulanka Barcelona, muxuuse ka yiri Messi?? – Gool FM
RASMI: Neymar Jr oo heshiiska u kordhiyay Paris Saint-Germain…(Immisa sano ayuu sii joogi doonaa Faransiiska?)
Dajiye October 27, 2020
(Turin) 27 Okt 2020. Tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay habeen dambe la ciyaari doonaan naadiga Barcelona, kaasoo ka tirsan kulamada labaad wareega group-yada ee tartanka UEFA Champions League.
Andrea Pirlo ayaa ka hadlay kabtanka kooxda Barcelona ee Lionel Messi, iyo sidoo kale go’aankiisa kaga aadan suurtogalnimada uu Cristiano Ronaldo kaga qeyb geli karo kulankan, inkasta oo uusan si buuxda uga soo kaban caabuqa Korona Fayras.
Tababaraha reer Talyaani ayaa hadaladii uu ka sheegay shirka jaraa’id waxaa ka mid ahaa:
“Cristiano Ronaldo, waxaan sugeynaa natiijooyinka baaritaanka caafimaad ee Korona Fayras, Leonardo Bonucci waa inaan qiimeyno xaalladiisa berry”.
“Giorgio Chiellini, ma ciyaari doono kulankan, sidoo kale Matthijs de Ligt wuxuu u baahan yahay inuu helo ogolaansho caafimaad”.
“Ku soo noqoshada Cristiano Ronaldo, xitaa haddii baaritaankiisa ku saabsan caabuqa Korona Fayras natiijada ka soo baxda ay noqoto mid fiican, ma sahlana in barri uu kahor yimaado Barcelon, kaddib 15 maalmood oo uu ka maqnaa tababarka guud, laakiin waan qiimayn doonaa arrintan kahor ciyaarta”.
Intaas kaddib Tababaraha kooxda Juventus ee Andrea Pirlo ayaa ka hadlay kabtanka Barcelona ee Lionel Messi, wuxuuna yiri:
“Kani waa kulankii ugu horeeyay ee aan aan kaga hor imaan doono anigoo ah macalin, waxaan kula dhaqmi doonaa xushmada uu u qalmo”.
“Messi waa taariikhda kubada cagta casriga ah, isaga iyo Cristiano Ronaldo waxay sameeyeen waxyaabo aan caadi aheyn muddo 15 sano ah”.
“Waxaa jira ciyaartoy waa weyn oo ku sugan Barcelona, ​​inkasta oo ay maqnaan doonaan qaar ka mid ah, fureheena wuxuu noqon doonaa go’aan qaadashada inaan guuleysanno, wuxuu noqon doonaa kulan adag laakiin aad u fiican”.